Ahoana ny fanoratana boky sy famoahana azy | Literatiora Vaovao
Encarni Arcoya | 27/12/2021 09:00 | boky
Misy fitenenana hoe eo amin'ny fiainana dia tsy maintsy manao zavatra telo ianao: manan-janaka, mamboly hazo ary manoratra boky. Maro ny olona manaraka an’ireo toerana telo ireo, saingy tsy ny fanaovana izany no olana, fa tsy maintsy manabe io zaza io any aoriana any, mikarakara ny hazo ary mamoaka boky. Amin'ity lafiny farany ity dia te hijanona izahay mba hahafantaranao inona no dingana amin'ny fanoratana boky sy famoahana azy.
Raha te hanoratra foana ianao nefa tsy mbola tapa-kevitra ny hanao izany dia homenay anao ny dingana rehetra tokony hataonao mba ho hitanao fa tsy dia sarotra loatra ny manao izany. Ny sarotra dia ny hahomby amin'ny boky.
1 Torohevitra alohan'ny hanoratana boky sy hamoahana azy
2 Dingana hanoratana boky sy hamoahana azy
2.1 Ahoana ny fomba fanoratana boky
2.1.1 Mananà hevitra
2.1.2 Manaova script
2.1.4 Fotoana hanamarinana
2.1.5 Manana mpamaky aotra
2.2 Ahoana ny famoahana boky
2.2.3 Sarony, fonony aoriana ary hazondamosina
Torohevitra alohan'ny hanoratana boky sy hamoahana azy
Raha mijery kely amin'ny tsenan'ny famoahana ianao dia ho hitanao fa misy karazana boky telo azonao idirana:
Avoaka miaraka amin'ny mpanonta, izay iandraiketan'izy ireo ny fandrindrana, ny fanitsiana ary ny famoahana. Misy ny mahatsara sy maharatsy azy, satria tsy mitovy amin'ny teo aloha ny mpitory ankehitriny (amin'izy ireo dia isa ianao ary raha tsara ny varotrao dia manomboka mijery anao bebe kokoa izy ireo).
Mamoaka miaraka amin'ny "editial". Nahoana isika no mametraka izany amin'ny teny nindramina? Eny, satria izy ireo dia mpamoaka izay tsy maintsy mandoa ny boky havoaka. Ary lafo izy ireo. Ankoatr'izay, tsy maintsy mandoa vola fanampiny ianao amin'ny fanitsiana, fametrahana, sns. Ary mety hidika izany fa mandoa anao 2000 na 3000 euros izy ireo amin'ny fanontana kely.
Post freelance. Izany hoe avoaka samirery. Eny, tafiditra ao ny tsy maintsy mamolavola sy manitsy ny tenanao, fa afa-tsy ireo zavatra roa ireo, ny ambiny dia afaka maimaim-poana satria misy sehatra toa an'i Amazon, Lulu, sns. izay ahafahanao mampakatra maimaim-poana ireo boky ary amidy. Ary tsy mila mampiasa vola amin'ny famoahana azy ireo amin'ny taratasy ianao; Avy amin'ireo sehatra ireo ihany no ahafahanao manafatra ireo kopia ilainao amin'ny vidiny tena mora.
Ny zava-dehibe amin'ny fanoratana boky dia tsy ny famoahana azy, fa ny fialam-boly sy ny fankafizana ny dingana, ny fiainana an'io tantara io ao amin'ny nofonao. Ny zava-misy amin'ny famoahana azy, sy ny fahombiazany na tsia, dia tsy maintsy faharoa.
Dingana hanoratana boky sy hamoahana azy
Raha ny momba ny fanoratana boky sy ny famoahana azy dia hanao izany izahay zarao ho roa samy hafa ny lalana. Samy mifangaro, eny, saingy tsy azo atao miaraka ary raha tsy vita aloha ny boky dia tsy azo avoaka.
Ahoana ny fomba fanoratana boky
Tsy mora araka ny eritreretiny ny fanoratana boky. Mety manana hevitra tsara ianao, izay zavatra voalohany ilainao, fa raha tsy hainao ny mandrafitra azy sy ny fomba fitantarana azy Mihoatra ny folio iray na roa, tsy dia misy dikany loatra izany. Noho izany, ny dingana tsy maintsy ataonao mba hidina amin'ny asa dia ireto manaraka ireto:
Tsy miteny izahay hoe "hevitra tsara", na dia mety tsara aza izany. Ny tanjona dia izay Fantatrao izay hosoratanao, fa ianao no manana ny teti-dratsin’izay hitranga.
Izany dia zavatra izay miasa tsara ho ahy, ary afaka ihany koa Omeo hevitra ny fanitarana izay azon'ilay tantara na boky hosoratanao. Saingy, mitandrema, tsy izany no tetika farany. Amin'ny ankapobeny rehefa manoratra ity ianao dia hiova izany, manampy toko bebe kokoa, mampitony ny hafa ...
Inona no karazana mpitari-dalana tokony hataonao? Eny, zavatra mitovy amin'ny fahafantarana izay hitranga amin'ny toko tsirairay ao an-tsainao. Avy eo ny tantaranao dia afaka mitondra ny toetrany manokana sy ny fiovana, saingy hiankina be dia be izany.
Ny dingana manaraka dia ny manoratra. Tsy misy intsony. Ianao dia tokony ampidiro ao anaty antontan-taratasy izay rehetra noeritreretinao ary raha azo atao dia alamina tsara mba ho mora arahina ny tantara.
Mety haharitra herinandro vitsivitsy, volana, na taona maromaro izany, koa aza kivy. Ny zavatra tsara indrindra azonao atao dia ny manoratra, tsy mieritreritra be loatra momba ny fandehany. Hisy fotoana hanaovana izany. Ny tanjonao dia ny hahatratra ny teny hoe "Famaranana".
ny ny fanavaozana dia matetika atao imbetsaka, Tsy iray ihany izy io, indrindra fa ireo boky voalohany. Ary tsy tokony ho azonao antoka fotsiny hoe marina ny tsipelina, fa mafy orina ny teti-dratsy, tsy misy sisiny mivaingana, tsy misy olana na zavatra tsy mitombina, sns.
Ny ataon’ny mpanoratra maro dia avela hiala sasatra kely io boky io ka rehefa haka azy dia toa vaovao amin’izy ireo ilay izy ary lasa tanjona kokoa. Eto dia miankina amin'ny olona tsirairay ny misafidy ny handao azy na hametraka anao mivantana hojerena.
Manana mpamaky aotra
Un Zero reader dia olona mamaky boky ary manome anao ny heviny tsy mitongilana, mitsikera ny zavatra nosoratanao, mametraha fanontaniana amin'ny tenanao ary milaza aminao izay ampahany tsara indrindra ary tokony hojerenao.
Izy io dia karazana mpandinika izay manao izay hahazoana antoka fa ny tantara dia manana ny fahamendrehana izay ahafahanao mamoaka azy.
Ahoana ny famoahana boky
Efa manana ny boky voasoratra isika ary heverina fa tsy hikasika na inona na inona amin'ny tantara mandrafitra azy ianao (izany miaraka amin'ny nuances, mazava ho azy). Koa izao no fotoana hieritreretana momba ny famoahana azy ary, noho izany, ny dingana tsy maintsy ataonao dia ireto manaraka ireto:
Na dia tamin'ny dingana teo aloha aza dia nilaza taminao izahay mba hijery ilay tantara alohan'ny hamoahana azy, ny marina dia manana ianao tsy hevitra ratsy ny matihanina proofreading, ny mifanohitra amin'izany. Ary io olona io dia ho tanjona tanteraka ary ho afaka hahita zavatra izay tsy tsapanao.
Ny dingana manaraka dia ny fametrahana ny boky. Amin'ny ankapobeny rehefa manoratra dia atao amin'ny endrika A4 izany. SAINGY Ao amin'ny A5 ny boky ary misy sisiny, lohapejy, tongotra, sns.
Mba hijerena tsara izany rehetra izany dia mila programa tsara ianao (ho fampahalalana, ny iray ampiasaina matetika dia Indesign).
Izany dia ahafahanao manana antontan-taratasy mety amin'ny fanontana amin'ny endrika boky.
Sarony, fonony aoriana ary hazondamosina
Fampiasam-bola hafa tsy maintsy ataonao dia ny manana fonony anoloana, fonony aoriana ary hazondamosin'ny boky, izany hoe ny ampahany hita maso, ary ilay iray mahasarika ny mpamaky haka ny bokinao sy hamaky ny momba azy.
Afaka maimaim-poana izany (raha mampiasa môdely ianao) na karama raha mangataka ny serivisy mpamorona hanao izany ho anao ianao.
Farany, manana izany rehetra izany ianao, tonga ny fotoana handefasana azy. Na tsia. Raha tianao ny mpampanonta hamoaka azy, dia tsy maintsy mandefa izany ianao ary miandry azy ireo hamaly..
Raha tianao ny mamoaka azy samirery, izany hoe mamoaka ny tenanao, dia tsy maintsy jerenao ny safidy. Iray amin'ireo voafidy indrindra ny Amazon, satria tsy misy vidiny ny hahazoana azy any.
Mazava ho azy fa manoro hevitra izahay, Alohan'ny hanaovana izany dia soraty ao amin'ny Fananan-tsaina ny asanao, ary makà ISBN aza mba tsy hisy hangalatra ny hevitrao.
Ankehitriny rehefa hainao ny manoratra boky sy mamoaka azy, manana fanontaniana bebe kokoa momba izany ve ianao? Anontanio izahay dia hamaly anao izahay.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Haisoratra ankehitriny » Literatura » boky » Ahoana ny fanoratana boky sy famoahana azy
Boky sy tantara Krismasy. Safidy